Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.2.4 ပျံ့
ပြည်သူ့အင်အားပျံ့, အသုံးပြုမှုပျံ့, နှင့် system ပျံ့က hard ရေရှည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလေ့လာဖို့ကြီးမားတဲ့ဒေတာအရင်းအမြစ်သုံးစွဲဖို့ပါစေ။
များစွာသောကြီးမားသောဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များ၏အကြီးအအားသာချက်တစ်ခုမှာသူတို့အချိန်ကျော်ဒေတာစုဆောင်းကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များကကျော်အချိန်ဒေတာ, longitudinal အချက်အလက်များ၏ဒီလိုမျိုးခေါ်ပါ။ နှင့်အညီ, သဘာဝ, longitudinal ဒေတာပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာဘို့အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်သို့သော်တိုင်းတာခြင်းစနစ်ကသူ့ဟာသူတည်ငြိမ်တဲ့ဖြစ်ရပါမည်။ လူမှုဗေဒပညာရှင် Otis Dudley Duncan က၏စကား၌, "သင်ပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာချင်လျှင်, တိုင်းတာမပြောင်းဘူး" (Fischer 2011) ။
ဖန်တီးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေရာတွေ-နေကြတယ်, ငါသည်ပျံ့မခေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားလုံးအချိန်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဖမ်းယူကြောင်းကံမကောင်းစွာပဲ, များစွာသောကြီးမားသောဒေတာစနစ်များကိုအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးစနစ်။ လူဦးရေပျံ့ (သူတို့ကိုသုံးပြီးသူအတွက်အပြောင်းအလဲ), အမူအကျင့်ပျံ့ (လူသူတို့ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုအပြောင်းအလဲ) နှင့်စနစ်ကပျံ့ (စနစ်ကိုယ်တိုင်ကအပြောင်းအလဲ): အထူးသဖြင့်, ထိုစနစ်များကိုသုံးအဓိကနည်းလမ်းပြောင်းလဲ။ ပျံ့၏သုံးသတင်းရပ်ကွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သဲလွန်စဒေတာအတွက်မည်သည့်ပုံစံကိုကမ္ဘာ့အရေးပါသောပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်, သို့မဟုတ်ပါကပျံ့အချို့ကိုပုံစံကိုသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုတာ။
ပျံ့-လူဦးရေ၏ပထမဦးဆုံးအရင်းအမြစ်စနစ်သုံးပြီးသူပျံ့-ဖြစ်ပါသည်, ဤအချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်အကြေးခွံများနှင့်ရေတိုအချိန်အကြေးခွံပေါ်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် 2008 ခုနှစ်ကနေလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်လူများ၏ပျမ်းမျှအသက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ကိုတင်ပြရန်။ ကွဲပြားခြားနားသည်မည်သည့်အခိုက်မှာ system ကိုသုံးပြီးသည်ဤရေရှည်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, လူများအပြင်၌။ ဥပမာအားဖြင့် 2012 ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများကရေးသားခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်. မှာ tweet ၏အချိုးအစားနေ့ နေ့မှစ. မြန်သည် (Diaz et al. 2016) ။ ထို့ကြောင့်ဘာကို Twitter-ကျမ်းပိုဒ်များ၏စိတ်ဓါတ်များအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းငှါ, အမှန်တကယ်ပဲဆိုယခုအချိန်တွင်ပြောနေတာသူအတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်လိမ့်မယ်။
စနစ်တစ်ခုကိုသုံးပြီးသူအတွက်အပြောင်းအလဲများအပြင်, စနစ်အသုံးပြုသည်အဘယ်သို့ရှိအပြောင်းအလဲများကိုလည်းရှိပါတယ်။ ဆန္ဒပြပြောင်းလဲအဖြစ်ဥပမာ, အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအတွက် Gezi ပန်းခြံဆန္ဒပြပွဲများ Occupy စဉ်အတွင်း 2013 ခုနှစ်ဆန္ဒပြသူတွေ hashtags သူတို့ရဲ့အသုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဤတွင် Zeynep Tufekci ဘယ်လိုဖွင့် (2014) သူမ Twitter ပေါ်တွင်နှင့်မြေပေါ်မှာအပြုအမူလေ့လာခဲ့သောကွောငျ့သူမ detect နိုင်ခဲ့သည်သောပျံ့, ဖော်ပြခဲ့:
"ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းအဖြစ်မကြာမီဆန္ဒပြလွှမ်းမိုးပုံပြင်, လူတွေအမြောက်အများဖြစ်လာခဲ့သည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ။ ။ သစ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်ဆန်းဖို့အာရုံစိုက်ဖို့ကလွဲလို့ hashtags သုံးပြီးတော့ဘူး။ ။ ဆန္ဒပြပွဲများဆက်လက်နှင့်ပင်ပိုမိုပြင်းထန်လာချိန်တွင် .. အ hashtags ချသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ အင်တာဗျူးများဒီအကြောင်းရင်းနှစ်ခုထုတ်ဖော်ပြသ။ လူတိုင်းခေါင်းစဉ်ကိုသိတခါပထမဦးစွာသည်, hashtag ဇာတ်ကောင်-ကန့်သတ်ထားတွစ်တာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တစ်ကြိမ်ပိုနှင့်ဖြုန်းတီးမှာခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ, hashtag မအကြောင်းပြောနေတာအဘို့, အထူးခေါင်းစဉ်မှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ဘို့သာအဖြစ်အသုံးဝင်သောမြင်ကြခဲ့ကြသည်။ "
ထို့ကြောင့်ဆန္ဒပြ-ဆက်စပ် hashtags နှင့်အတူ tweets ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်ဆန္ဒပြပွဲများကိုလေ့လာနေသူသုတေသနပညာရှင်များကဤအကြောင်းကြောင့်အမူအကျင့်ပျံ့၏ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတစ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်သဘောရှိလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ကအမှန်တကယ်ယုတ်လျော့ရှေ့တော်၌ထိုဆန္ဒပြပွဲ၏ဆှေးနှေးခရှည်လျားလျော့နည်းသွားကြောင်းယုံကြည်ပေလိမ့်မည်။
ပျံ့၏တတိယကြင်နာစနစ်ကပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကပြောင်းလဲနေတဲ့လူသို့မဟုတ်သူတို့၏အမူအကျင့်ပြောင်းလဲသည်မဟုတ်, စနစ်ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲနေတဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်, အချိန်ကျော်က Facebook status update များရဲ့အရှည်ပေါ်မှာကန့်သတ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အဆင့်အတန်း updates များကိုမဆို longitudinal လေ့လာမှုဒီပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပိုငျးအမှအားနည်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ System ကိုပျံ့အနီးကပ်ကျွန်တော်တို့ယခုဖွင့်သော algorithmic သဖွငျ့ကိုခေါ်ပြဿနာနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။